ထင်ချင်သလိုထင်… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » ထင်ချင်သလိုထင်…
Posted by Moe Z on Sep 22, 2011 in Critic, Society & Lifestyle, Think Different | 24 comments
မိုးစက် မန္တလေးကို ခဏခဏရောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်ကိစ္စနဲ့ရော အမျိုးတွေဆီအလည်သွားတာရောပေါ့။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ အလုပ်ကလွှတ်လို့ workshop တစ်ခုသွားတက်ရတယ်။ အလုပ်ကစီစဉ်ပေးတဲ့ ဟိုတယ်မှာပဲ အဖော်တွေနဲ့အတူတည်းဖြစ်ခဲ့တယ်။ အလုပ်ကိစ္စမပါရင်တော့ အမျိုးတွေအိမ်မှာပဲတည်းတယ်။ မဟုတ်ရင် ကိုယ့်ပိုက်ဆံကုန်မှာကိုး ။ မိုးစက်က morning person မဟုတ်ပါ။ ကိုယ့်အိမ်မှာဆိုရင် မနက် ၇း၀၀ နာရီမထိုးမချင်း ထလေ့မရှိပေမယ့် ခရီးသွားရင်တော့ ၆း၀၀ နာရီဆိုရင်အပြင်ထွက်ဖို့ အဆင်သင့်၊ နေရာဒေသအသစ်မှာ လေ့လာစူးစမ်း(စပ်စု)ရမယ့် အချိန်တွေကိုတော့ အိပ်ပစ်ဖို့နှမျောတယ်လေ။ အခုတစ်ခေါက်မန္တလေးခရီးမှာ တည်းရတဲ့ဟိုတယ်ကမြို့လည်ခေါင်မှာပါ။
ထုံးစံအတိုင်း ၅ နာရီခွဲမှာထ ရေချိုးအ၀တ်အစားလဲပြီးတော့ ၆နာရီအတိ။ Breakfast စားဖို့ကစောသေးတော့ အတူလာတဲ့အဖော်တွေကိုစောင့်ရင်း Lobby မှာသတင်းစာထိုင်ဖတ်နေလိုက်ပါတယ်။ ၆နာရီဆိုပေမယ့် sightseeing ထွက်တဲ့ နိုင်ငံခြားသားဧည့်သည့်တွေ၊ check out လုပ်တဲ့သူတွေနဲ့ Reception မှာတော့ စည်ကားနေပါတယ်။ ခဏနေတော့ ကောင်မလေးတစ်ယောက် lift ထဲကထွက်လာတယ်၊ ဒီမှာတည်းတဲ့ဧည့်သည်ပေါ့နော်။ ကြည့်ရတာအသက်က ၂၀ စွန်းရုံလေးပဲရှိမယ်ထင်တယ်။ လှတယ်ဆိုတာထက် တော်တော်လေးကိုချစ်စရာကောင်းတယ်။ ၀တ်ပုံစားပုံလေးကလည်း အထက်တန်းကျကျလေးဆိုတော့ မိုးစက်လည်းစိတ်ထဲကအမှတ်တွေပေးနေလိုက်တယ်။ အဲဒါမိုးစက်တို့သူငယ်ချင်းတွေ အကျင့်ပဲ။ ယောက်ျားလေးဖြစ်ဖြစ် မိန်းကလေးဖြစ်ဖြစ် လှရင်ကြည့်ပြီးအမှတ်ပေးကြတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ မိုးစက် တစ်ယောက်တည်းပေါ့။ အဲဒီကောင်မလေးက Reception ကိုသွားပြီး ဖုန်းခေါ်နေတယ်။ မိုးစက်ထိုင်တဲ့နေရာက သူနဲ့ဆိုရင် ၆ပေလောက်ပဲဝေးတယ်။ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာလည်း လူကြီး ၂ယောက်က TV ကလာတဲ့သတင်းကိုထိုင်ကြည့်နေကြတယ်။ ကောင်မလေးကလည်း ပုံမှန်ပြောနေကြအသံမျိုးပဲဆိုတော့ သူ့ရဲ့အသံကိုအတိုင်းသားကြားနေရတယ်လေ။ တမင်နားထောင်ပြီး သူများကိုယ်ရေးကိုယ်တာကို စပ်စုတာလုံးဝမဟုတ်ရပါ။
ဖုန်းပြောတာပဲ ဘာဆန်းလဲလို့မေးရင် မဆန်းပါဘူး။ ဟိုတယ်တွေမှာ ဖုန်းကို အခန်းထဲကလည်းခေါ်လို့ရတာပဲ။ အောက်ထိဆင်းလာစရာမလိုပါဘူး။ သူ့ဟာသူဆင်းပြောတော့ရောဘာဖြစ်လဲ။ ဟုတ်ကဲ့ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး၊ ကြိုက်တဲ့အချိန် ကြိုက်တဲ့နေရာမှာပြောလို့ရပါတယ်။ သူပြောတဲ့စကားတွေက ဆန်းတာပါ။ မိုးစက်ကြားတဲ့အတိုင်း အပိုအလိုမရှိကွက်တိ ပြန်ရေးပြပါ့မယ်။ ဖတ်ကြည့်ပါ။
ကောင်မလေး။ ။ အမ ဖုန်းခေါ်ချင်လို့။
Operator ။ ။ ဟုတ်ကဲ့နံပါတ်ပြောပါရှင်။
ကောင်မလေး။ ။ xxxxxxxxxxxxx
အန်တီကျွန်မအခု ဟိုတယ်ရောက်ပြီ။ သူတို့ကလိန်ကကျစ်လုပ်တာ။ ပြောတော့ ၂ ယောက်ဆိုပြီး အခု အားလုံး ၄ယောက်တောင်၊ ကျွန်မတစ်ယောက်တည်း သေသွားမှာပေါ့။
သူတို့ကမခေါ်ချင်ဘူး၊ ကျွန်မတစ်ယောက်တည်းမနိုင်ဘူးလို့ ပြောထားတယ်၊ အန်တီပါလိုက်ခဲ့ ဈေးထပ်ညှိရအောင်၊ သူတို့အချင်းချင်းကို ညှိလို့မရသေးဘူး။ အရမ်းကပ်နေကြတယ်၊ အခုကောင်တာကလာဆက်တာ။ ကျွန်မ ဧည့်ခန်းမှာပဲစောင့်နေမယ်၊ အခုလာခဲ့နော်
ပြီးရော ပြီးရော ဒါပဲ..
Operator ။ ။ ၉၀၀ပါ။
ကောင်မလေး။ ။ ဟိုလူတွေ ပေါင်းရှင်းခိုင်းလိုက်မယ်အမ။
ဖုန်းပြောပြီးတာနဲ့ အဲဒီကောင်မလေးက မိုးစက်ရှေ့ကခုံမှာလာထိုင်လိုက်တယ်။ သူငယ်ချင်းတွေလည်း ဆင်းလာပြီမို့ မနက်စာစားဖို့ Dinning Room ဘက်ထွက်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။ နာရီကြည့်လိုက်တော့ ၆နာရီနဲ့ ၄၅မိနစ်။ စိတ်ထဲကနေ ခုနကပေးထားတဲ့အမှတ်တွေကို ပြန်နှုတ်လိုက်တာ မိုင်းနပ်စ်တောင်ပြသွားတယ်။ ကိုယ့်အတွေးနဲ့ ကိုယ်ပေါ့နော်။
ကောင်မလေး သနားပါတယ်နော် …
အဲဒါမျိုးတွေကြားတာ ရင်ထဲမချိဘူးကွယ်။ တောက်…ငါကလည်း မပြန်နိုင်သေး…
မနက်စောစောစီးစီး အလုပ်ကြိုးစားတဲ့သဘောပါ မိုးစက် ရယ် ……..
အဲဒါမျိုး တစ်ခါကြုံဘူးတယ် နဲနဲကြာပြီ အလုံလမ်းက ဟော်တယ်မှာ
အဲဒီကောင်မလေးတွေကို ကောင်တာ ကမေးနေတာ အိမ်လိပ်စာ လမ်း
ကောင်မလေးတွေကလဲ ကောင်းကောင်းမပြောပဲ ပေါက်တတ်ကရ ပြန်ဖြေတယ်
ကောင်တာက ၀န်ထမ်းကောင်မလေးက စောစောစီးစီး ကျက်သရေကို မရှိဘူးဘာညာ နဲ့ ပွစိပွစိ လုပ်တယ်
သူတို့လေးတွေကတော့ အေးဆေးပဲ မျက်နှာတောင် မပျက်ဘူး
အသက်က ငယ်ငယ်လေး ရုပ်လေးတွေက ချစ်စရာ ၀တ်ထားတာကလဲ ခပ်မိုက်မိုက် ဒီအတိုင်းတွေ့ရင် ထင်ရက်စရာမရှိ စိတ်မကောင်းရုံကလွဲလို့ ဘာမှမတတ်နိုင်
အင်း… ဒါကလည်း သူ့အကြောင်းနဲ့ သူရှိမှာပေါ့နော်။
နောက်တစ်ချက်က ဘာမှန်းသေချာမသိပဲ ဖုန်းလေးနယ်စွန်နယ်ဖျားကြားမိတာနဲ့ ကောက်ချက်ချမစောပါနဲ့ဦးကွယ်…
အမ ..ကျွန်မ ရောက်ပြီ..
နှစ်ယောက်ပဲပြောထားတာ အခု လေးယောက်ရောက်နေတယ်..
သူတို့ လေးယောက်စလုံးကို ဆံပင်ဖြူနှုတ်ပေးရမယ်ဆိုရင် ကျွန်မတစ်ယောက်ထဲ ဘယ်နိုင်မလဲ
(အဲဒီလို ပြောတာ နေမှာပါ…. ဒါပေမယ့် မထင်ပါ…:P)
ဟိုတယ်တွေ ၊ မိုတယ်တွေ ၊ တည်းခိုခန်းတွေ ၊ အင်းတွေမှာ .. အဲ့ဒီလိုဟာတွေ တစ်ပုံကြီး ..တစ်ချို့ဆို အဲ့ဒါမလုပ်စားပဲ မော်ဒယ်လုပ်စားလျှင်တောင် အတန်းဝင်မဲ့ ရုပ်မျိုး … ။ ထရိတ်ဒါးသွားတုန်းက တစ်ခါကြုံဖူးတယ် .. ညနေခြောက်နာရီခွဲလောက် … ဓါတ်လှေခါးစီးပြီး တက်တော့ … တံခါးပိတ်ခါနီး ကောင်မလးတစ်ယောက် အတင်းဝင်လာတာ… သူ့ပုံက ပြာပြာသလဲနဲ့ .. ဟောဟဲဟောဟဲ ဖြစ်နေတယ် … ကျွန်မကလည်း မသိတဲ့လူနဲ့စကားမပြောချင်တာကြောင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်ဝင်လာတဲ့သူ့ကို ပြုံရုံလေး နှုတ်ဆက်လိုက်တယ် … သူက ပြန်ပြုံးပြတာတင်မကပဲ ..မောလိုက်တာ အစ်မရယ် .. ကျွန်မမေမေကြီးမသိအောင် ခိုးလာရတာ တဲ့ … ။ ဒါနဲ့ စိတ်ဝင်စားပြီး မေမေကြီးက ဘယ်သူလဲမေးတော့ ညီမတို့အလုပ်ရှင်တဲ့လေ … ခေါင်းမကြီး ကိုပြောမှန်း ..သူ့နောက်စကားတွေအရ သိခဲ့ရပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ် .. ကောင်မလေးက အသက် ၂၂ပါ … ။ ဂျပန်အမျိုးသားက အလုပ်ရှင်မသိအောင် ခေါ်ထားလို့ ရောက်လာတာပါတဲ့ ..ဈေးက တစ်သောင်းခွဲနဲ့ ညှိထားတာပါတဲ့လေ … အလုပ်ရှင်သိလျှင် သူမက ငါးထောင်ပဲ ရပြီး အလုပ်ရှင်က တစ်သောင်းယူလို့ပါတဲ့ … ။ သိလျှင် အလုပ်ဖြုတ်မှာမို့ … နေစရိတ်အတွက် … ဒီလိုပဲ ကြားပေါက်ရှာနေရပါသတဲ့ … ။ ကဲ .. အရွယ်ကောင်းလေးတွေ … ကိုယ်စွမ်းဥာဏ်စွမ်းရှိသရွှေ့ အလုပ်တွေ လုပ်ပြီး ထိပ်တန်းနေရာတွေ ရောက်နေသင့်တာ(သူများကိုသာ ပြောတာ ကျွန်မတောင် အသုံးမကျလို့ .. ဒုံရင်းကဒုံရင်းအလုပ်ပဲ ) … အခုတော့ … နိုင်ငံခြားသားရဲ့ အသုံးချခံဖြစ်ရတယ် .. ရင်နာစရာကောင်းလိုက်တာ … ။ ကောင်မလေးက ဆယ့်ခြောက်ထပ်မှာ ဆင်းသွားသည့် တိုင်အောင် .. ကျွန်မက အတွေးမပြတ်သေးပဲ … ကျန်ခဲ့တယ်လေ
(သူများကိုသာ ပြောတာ ကျွန်မတောင် အသုံးမကျလို့ .. ဒုံရင်းကဒုံရင်းအလုပ်ပဲ ) … အခုတော့ … နိုင်ငံခြားသားရဲ့ အသုံးချခံဖြစ်ရတယ် .. ရင်နာစရာကောင်းလိုက်တာ … ။
အတူတူပါပဲ မမ etone ရယ်..ကိုယ့်လောက်မှ အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့သူတွေ(နိုင်ငံခြားသားတွေ)က ကိုယ့်ထက်ပိုပြီးနေရာရကြတယ်
အပေါ်ကသကောင့်သားလေးယောက်ကလည်း ဒီအချိန်မှာ ဒါမျိုးလုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး….
ထင်ရမယ်ဆိုရင် မိုးစက်ကို ညအတွက် ကြော်ငြာသွားတာထင်တယ်။
လိုအပ်ရင်ဆက်သွယ်ရမဲ့ ဖုန်းနံပါတ်လေး တို့ မေးလိုက်ရမှာ။
ဗုဒ္ဓေါ..မိုးစက်က မိန်းကလေးဆိုတာပထမဆုံး post မှာကတည်းကပြောပြီးသားပါ..
“ နံနက် ၁
နေ့၁
ည ၃ ”
ဆိုတာများ မကြားဖူးလို့ ထင် ။
နေ့ ၄၊ ည ၆၊ ထမင်းစားပြီး ၁ လို့ဖတ်ဖူးပါတယ်ကွယ်…။
Mr. & Mrs. Smith( Smith (Brad Pitt) and Jane Smith (Angelina Jolie))ရုပ်ရှင်မှာတော့.. ၁၀ကြိမ်လို့ ဘရက်ပစ်ကပြောတယ်မှတ်မိတာပဲ.. မြန်မာတွေက ထမင်းစားတခါ ပိုတယ်..။
ကောင်မလေး သနားစရာ ကောင်းတယ် ထင်တာပဲ။
အဲဒါမျိုး တယောက်စာဈေးပြော..၂ယောက်ဝင်..၃ယောက်ဝင်.. တကမ္ဘာလုံးရဲ့.. နိုင်ငံတိုင်းရဲ့.. အဲဒီလောကမှာဖြစ်နေတာပဲ..။ တန်ရာတန်ကြေးရအောင်.. ခေါင်းဆိုတာရှိပြိး.. သူက.. အဲဒါမျိုးတွေမဖြစ်အောင်.. တန်ရာကြေးရအောင်.. တာဝန်ယူကာကွယ်ပေးတာလို့.. ထင်ပါတယ်..။
အပေါ်က… မိုးဇက်စာမှာလည်း.. အန်တီလာဖို့ .ကောင်မလေးကခေါ်နေတယ်မဟုတ်လား..
ကျုပ်ကတော့.. လူတကာက.. မိန်းကလေးတကာကို.. အမှတ်ပေး..အထင်မှား.. မသေချာ… အမြင်မှားနေကြတာထက်စာရင်… ဥပေဒေအရ.. ပြည့်တန်ဆာကို.. တရားဝင်လုပ်ပေးတာကို ဖြစ်စေချင်မိတယ်..။
အဲဒါမျိုး.တွေ..လုပ်ခွင့်ရှိတဲ့.. နေရာဒေသလည်း.. သတ်သတ်မှတ်မှတ်ရှိသင့်တာပေါ့…။
ယဉ်ကျေးမှု.. ကျမ်းမာရေး၊ လူမှုရေး အကုန်အတွက်ပိုကောင်းမယ်ထင်မိတယ်..။
ဟော်တယ်မှာဆိုတော့ ကြေးကြီးတယ်ထင်တယ်။ ကျနော်ကြားဖူးသလောက်ကတော့ အပြင်မှာဆို ၃-၄ ယောက်လောက်ကတော့ ပုံမှန်ရှိတယ်ကြားဖူးတာပဲ။ ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိပါ။
ကျုပ်ဖြင့် တစ်ခါမှ မကြားဘူးပါဘူး
အဲ့သည်အချိန်ဆိုတာ ညကတည်းက လောကဓံကို ရုန်းရင်းကန်ရင်း
ချိနဲ့ပြီး ဖတ်ဖတ်မောလို့ ဖလက်ပြတဲ့အချိန်
မသကာ ညဉ့်နက်ကတည်းကနေ ဟဝှပြုကြပြီး အဲ့သည်အချိန်က
အပုတ်ချိန်တောင်ရောက်နေပြီ မယုံရင် လက်ညှိုးနဲ့ထိုးပြီးနမ်းကြည့်ပါလား :D
အံ့ဖွယ်ဘဲ ဘိန်းမုန်ကိုသာ တစ်ယောက်တစ်ခြမ်းကိုက်ခြားတာလုပ်ဘူးတယ်
ကျုပ်ကတော့ တစ်ယောက်ထည်း လေးငါးခြောက်ခုစားတာ မုန့်ဆီကျော်
ဒါနဲ့ စမောလ်ကက်ဆိုတဲ့လူ ဘစ်ကက်ဆိုတာ အားကျပြီး စမောကက်လုပ်ထားသလားသိဘူး
လစ်တဲလ်ကက် ဒါမှမဟုတ် ကစ်တဲလ် ဆိုတဲ့နာမည်မျိုးဘဲပေးသင့်တယ်
……….ဗေဒဝိဇ္ဖာ နာမည်ပေးအကြော်အမော် မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု
ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်ဆိုတဲ့စကားမှာ ဘာတွေပါတယ်ဆိုတာကို မသိတဲ့မိန်းကလေးတွေ ခိုးစားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးတွေတွေးမိရာက ခုလိုဖြစ်ကုန်တယ်လို့ထင်ပါတယ် ။
ကောင်း…ရောင်း…….ကောင်း…..၀ယ် ….. မယုံရင် ကိုပေါက်ဖော်မေးကြည့် …
Moe Z ရေ .
Moe Z တင်တဲ့ post ဖတ်လာတာ အောက်ဆုံး ရောက်တော့ Moe Z ရဲ့ လျှာတစ်လစ်ကြီး တွေ့ တော့ ဘယ်ဘက်ကတွေးတွေး ဒီpost နဲ့ ဒီပုံ တယ်လိုက်ပါလားလို့……..
စာကျန်ခဲ့ လို့၊ ပြန်ပြင်ချင်လို့.. ပွုင့် လိုချင်လို့မဟုတ်ပါ။…..
ကောင်း…ရောင်း…….ကောင်း…..၀ယ် ….. ဟုတ်မဟုတ်သိချင်ရင် ကိုပေါက်ဖော်မေးကြည့် …